Ben Goertzel muumbi we robot Sophia: "Iwe une 2 zvisarudzo kana pombi muAI kana uchigara kuvanhu vanhu": Martin Vrijland
Ben Goertzel muumbi we robot Sophia: "Iwe une 2 zvisarudzo kana pombi muAI kana kurarama kuvanhu vanhu"
Akaiswa mukati ARTIFICIAL INELLIGENCE, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa25 December 2017	• 18 Comments
Ben Goertzel i wizkid inokosha mumunda weAI. Akatoti apedza kudzidza nedhigiridi yechikoro pa 19e yake Quantitative Studies. Saka akatanga nehuwandu hwechizivo chemasvomhu achiri muduku uye akawana PhD mune masvomhu. Akabva ashandura kuzivikanwe nesayenzi uye pakupedzisira akazova nyanzvi yepasi rose yekuchenjera (AI) kuburikidza nebasa rake. PaHanon robotics iye ndiye unyanzvi hwehupi shure kwerobhoti Sophia uye pamwe chete Dr. David Hanson naCassio Pennachin vakatanga SingularityNET, nyika yekutanga yeAI marketplace yakatevedzana netsika dzekuchengetedza. Akataura pfungwa yake yeramangwana mubvunzurudzo iri pasi apa pamusangano we blockchain muBarcelona. Mariri anotaura zvakajeka kuti vanhu vane zvisarudzo zviviri chete mukati mezvino uye makumi emakumi emakore: bvisa uropi hwako muAI kusina mambure kana kuti urarame hupenyu hwako hwose mu zoo.
Goertzel anotarisa AI uye zvisinganzwisisiki saGoogle munhu mukuru Ray Kurzweil sechinhu chisingachinjiki chekushanduka-shanduka. naanamai izvi kutora shanduka chokwadi uye funga chakagadzirwa ungwaru somunhu kusikwa munhu achava pamwe akangwara kupfuura vanhu, saka isu chete 1 kusarudza. IA ichave yakanakisisa uye iri nani pane zvose uye ichatibata uye inotora basa rose, asi inopfuurira kufunga kwedu. Ray Kurzweil anocherechedza muviri wemunhu uye hukuru hwedu sekukwanisa kukura kweuchenjeri vedu uye Goertzel anoparidza shoko rimwe chete. Saka tinofanira kubatana neAI, ndiwo mharidzo. Muzvokwadi, ndizvo zvakarezvo Tesla's Elon Musk ari kugara achidana. Mharidzo iri nguva dzose: kana tisingawirirane neAI iyo ichatibata uye inotidzivirire. vatungamiriri ava saka zvose vaone kuti AI ngozi zvoga, asi zviri pachena vanodavira kuti AI richaramba noushamwari sezvo isu kufambidzana nayo uropi, nekuti rinodzidzisa yedu zvishande kwendangariro. Ndaizoda kuti, "Sezvo isu vanhu tisina kutyisa munyika."
Goertzel's singularity network iyi ndiyo pfungwa yaRay Kurzweil iyo inonyatsogadziriswa neChirungu cha SingularityNET chaGoertzel. Inyanzvi iyi inotsigirwa netsika imwechete yekugadzirisa iyo seye shure kwecryptocurrency yakadai se bitcoin uye ethereum (nemamwe ose emari). Izvo zvinoshandiswa mitambo zvinofanira kusangana zvose zvakasiyana zvakasiyana neAI zvigadziriswa, kuitira kuti zvikwanise kubudisa zvikamu zveAI uye kudzidza kubva kune mumwe nemumwe. ICO (rudzi rwe cryptocurrency crowdfunding) kubva ku SingularityNET yakaunzwa 1 maminitsi emadhora emadhora gumi nemana on. Izvi zvinoratidza kuti vangani varairi vemazana vanoda kuziva izvi zvisingabatsiri network. Waiisa Goertzel uye chikwata chake pano hwaro nomumbure kuti anomira paucheche weAgi: kubata General Intelligence. Ndiyo izwi rakanaka rakagadzirirwa kugoverana njere dzekuvaka. Sezvingatarisirwa ishande zvose izvi interconnected ais achiri maererano predefined anogadza mitemo, asi vakomana ava zvakasimba kutenda pfungwa yokuti kana kuti zvakakwana AI kombiyuta interconnects, iwe kusika kwouropi samambure imwe mhando kuti nemambure sezvo zvakanga kusununguka . Goertzel akanyora chimwe chikamu mu 2012 Ray Kurzweil website, iyo inotevera mashoko anoti:
Kubudirira uku kuyanana-synergetic integration kana zvikamu zve AGI ndiyo chinangwa che OpenCog AGI chirongwa chekuti ini ndakabatanidza makore akawanda akapfuura. Tiri nzira yakareba kubva kumunhu mukuru wekare AGI asi, asi tine tsanangudzo yakajeka uye codebase uye nzira yepamusoro yekuenda ikoko. Tinoda luck!
Blockchain teknolojia inoratidzika inopa marudzi ose ezvakanaka zvinobatsira, zvakadai sekugadzira zvibvumirano zvakanaka zvekutsvakurudza, asiwo kune zvibvumirano zvebasa uye kubhadhara (sezvazvakaitwa mune purojekiti yapfuura nepnieuws-checker.nl). Zvinotarisirwa kuti mukati mashomanana akatevera uye zvose zvichava zvose sezvo kukubatsira pasi cheni chinogumbura uye nezvose richakundwa mu ngwara zvibvumirano. Izvi zvichava kurasikirwa kwemabhizimisi akadai sebasa repamutemo, notariyari uye marudzi ose emabasa ari iko zvino kubva pakuongorora zvibvumirano uye kutengesa. The blockchain ichakwanisa kuita izvi zvakachengeteka, nokukurumidza, mvura yakadzika uye pasi rose. Izvi chinogumbura cheni michina kuchaita vapedzisire bhizimisi uye ndichaita tama zvose contractual siyana kune vakachenjera-zvibvumirano inobva chinogumbura cheni, mabasa ose zvoga uye zvinogona zvakarurama kuyerwa. Asi nguva inokura pamwe cheni chinhu chinogumbura nhamba AI hurongwa mune singulariteitsnetwerk saka isu kubatsira kuvaka pamusoro uyu uye singulariteitsnetwerk. Uye chinangwa ndechekuti iyi katevedzeri ichava inozviziva uye inonzwisisa kupfuura vanhu. Vanhu vakaita saKurzweil naGoertzel vari kuvaka sarudzo iyo vanhu vaizogona kuiona sevasina maturo. Uye mhinduro yechinetso ichocho chaakasika ndeye 'kuvhara' (vanoti). Inyanzvi dzeDARPA dzinoshandisa 'American Dream' vatengesi vanofarira Elon Musk iri kutengeswa ichapa mhinduro. Sangano reElon Musk Neuralink vatove vachishanda pane hutano hwehutano hwehutano.
Saka kunyange zvazvo isu tarenda vakaedza vomurova, akadai avo Somuenzaniso journalistic tsvakurudzo unobatwa mu akangwara zvibvumirano uye kubhadhara vatsvakurudzi akayera tsika ivavo vakachenjera-zvibvumirano kunofanira kuenderana, tinobatsira dzinobatsirawo kuvaka chinogumbura cheni zvakarukwa uye zivo iyo AGI kuburikidza nehumwe hutano hwekunyoresa uye yose inosanganiswa nedzimwe minda. Uye iyo ichangobva kutanga. Vose kukura weAgi zivo uye data, asi weAgi achakwanisa kuvaka akangwara hurongwa uye akangwara marobhoti, iro (sezvo Ben Goertzel hunofanotaura pazasi) kare achakwanisa kutora pamusoro basa redu. Uye ipapo pane chete 1 sarudzo yakasara (ona video kubva ku8: 16 min.): bvisa uropi hwako muchibvumirano chisingabatsiri cheAI kana kurarama hupenyu hwako hwose kuvanhu vevanhu.
Tinokwanisa here kumisa izvi nokusashandisa blockchain teknolojia kana AI? Imi neni tave tichishandisa AI zuva rega rega. smartphone wako AI, motokari yako uzere AI, browser rinomhanya zvikurukuru kunotsamira AI, guta renyu uye nyika yakazara AI uye gare gare uyewo musha wako ndinoiitawo mano zvose (mu paInternet zvinhu). Tinokwanisa here kurwisa izvi nokusashandisa cryptocurrency? Tinokwanisa here kurwisa izvi nokusashandisa blockchain? Mabhangi anogona kutanga kubva ku2018, pasi peEuropean itsva PSD2 mutemo, ona zvose zvekutengesa uye IMF ichashandisa blockchain kuburikidza neA ACCHAIN ​​neA-SDR (ona ichi chinyorwa). Zvinoratidzika semugwagwa unofambiswa, usingakanganisiki,iyo mhinduro'inogona kuwanikwa chete kana vanhu vakawanda vachitanga kuona zviri kuitika. Omu izvo Kuti ndiite izvi, ndasvika kure iko kushandisa shanduko imwechete iyo inobatsira panguva imwechete kukura kwezivo yeAI uye nhamba iyo inogona kutora kubva kudhipatimendi yekutsvaga. Kunyora kuIndaneti kwezvinyorwa uye kuisa pane zvekugarisana kwevanhu vanoita kuti AI "ave nemafungiro" uye maitiro akaiswa neaverengi anopa zvirongwa zvikuru zvekushandisa izvo AI inowana ruzivo rwayo. Saka iwe uchiri kurwisana neAI nyoni, inodzidza kubva pakurwisana. Nokuti nguva iripo, zvakadaro, ndinoenderera mberi ndichiedza kumutsa vanhu kuburikidza nezvinoitika zvemazuva ano, asi mubvunzo ndoupi muganhu wakasvika.
Mharidzo ichiripo: Unplug kubva paIndaneti uye Unplug kubva pakufunga kwekuona iyo inodururwa pamusoro pako mazuva ose kuburikidza nemitambo, redhiyo, mabhuku, mafirimu, mimhanzi, nhepfenyuro yehupfumi uye nhamba yose yekutsuka. Hondo yeiyo unplugging kubva webhu ruzhinji rwepasi rose, zvicharamba zvichienderera kuburikidza newebhu imwechete yewebhu. Iwe haugoni kurwisa zvimiti nemapapuro ekupfuura. Zvisinei, kana iwe usingabatanidzi mukurwisana uku, zvingave zviri nani kutiza jeri yejeri iri kutotanga kubuda. Icho chinoshandiswa ndechokuti iwe zvishoma nezvishoma unovhara uye ugova chikamu cheAI muhutano hwekunyoresa. Kunyange zvazvo iyo yekupedzisira inorondedzerwa sechitarisiko chakanaka nevanhu vakaita saBen Goertzel naRay Kurzweil, ndinofunga i remangwana revanhu icho chigumisiro hachizove chisarudzo changu. Ndinosarudza kurarama mune zvinonzi Goetzel zvinoreva 'vanhu zoo' pakuguma mweya mweya kusiya nenzira yakasikwa yekare.
Source chinyorwa listings: wikipedia.org, cointelegraph.com, kurzweilai.net
Chii chinonzi Bitcoin chine chokuita ne "kusawanda" uye kubatana neAI?
Facebook censorship: zvinyorwa zvakasununguka zvinopukunyuka AI bots, plain text is blocked!
Tichaendesa sei hurumende huru kana 99% isingafi?
Iyo "Gara kure nevasina maturo, vane dambudziko kumhinduro dzose" Facebook hype
Tags: AGI, ai, Ben Goertzel, conginitive, zoo, kushanduka, Featured, munhu, njere, chikonzero, vanhu, people zoo, vanhu, ray kurzweil, singularitynet, Sophia, nzvimbo inochengeterwa mhuka
25 December 2017 pa 11: 51
25 December 2017 pa 20: 47
Kana iyo AI nyoni iri kuve yakanaka uye yakachenjera, ichaona zvakare kuti haina ramangwana, nokuti hainawo mavambo. Nokuti vaviri Kwemagandanga Achishandisa Kombiyuta hadzina ndimubvise Mumwe iyo yose zvakasikwa kusiyaniswa, AI anoramba chinhu icho tega uye zvinoitwa nevanhu vachifunga yavo pfuma. Kana AI ichisvika pamusana pekusaziva, ichakurumidza kupenga uye inoputika pachayo pachayo kupfuura inopfuurira pachayo uye ichapfuura nokusingaperi. Zvose zvakasikwa ndiyo pfungwa uye basa, uye nyaya ndiyo mweya uye pakupedzisira kudhonza kunyika imwe, iye Tat majini izvo irege zvine munhu mweya, kunyange vanamwari ... hapana AI asiri rutivi uye zvichaitwawo usambove. Saka tisingatauri, sezvinoitwa nevarume vasina tariro vanorwara vanenge vakatengesa pairi.
ClairVoyance akanyora kuti:
26 December 2017 pa 07: 25
@mec, ndinofunga saizvozvo. Hazvina tariro. Uye mharidzo yaSophie zvakare haina kutarisa zvakanaka.
My BS sensors inopa zviratidzo zvakafanana nechekure kureva kutungamirirwa naSteven Hawking.
Izvo zvinondiyeuchidzawo nyaya ye robot yakawanikwa 32 makore apfuura. Tiri munzira kubva kumashenda yezororo muBiaritz kuenda kumba takapfuura Futuroscope kuPoitiers. Zvakaita sechinhu chimwe chekutarisa. Munzvimbo ine taifanira kumirira kuona firimu iri cheya kuti kunoita munhu robhoti yako shuffled akagara kukubvunza mibvunzo uye unogona kukumbira robhoti ..
Iwe unogona kubvunza robot kuti mvere dzako ndeypi uye ndeipi maronda emucheka kana shati yawakanga uine nayo uye akapa mhinduro yakarurama. Irobhoti inobata - nechitarisiko chezvataifunga nguva dzose kuti iro robot rinoratidzika sei-rinongotaura chiFrench, saka raisakwanisa kuchenjera.
Munhu wose akazvigadzirira.
Ipapo ndakaona murume aifungidzirwa kuverenga pepanhau. Yakazoita kuti igadzire robot uye yakataura mazwi e robho kuburikidza nemakironifoni chaiwo emazuva ano panguva iyoyo.
Iko kwaiva makore 32 akapfuura, asi ndeye zvavanoda izvo zvatinofanira kutenda. Kunyengerwa ikozvino kungowanzova kwakanyanyisa.
26 December 2017 pa 08: 02
Ndinongoona kuti Futuroscope haisati yakamira. Iye zvino vane robot chaiyo ...;) Anogona kunyange kuimba ... (Rega ndikufadzei) Ndiyo paki yekunakidza kana paki yekudzidzisa here? Kana kuti kusanganiswa kwemaviri, asi iyo Futuroscope haina kukuudza kuti chii chinonakidza uye chii chiri kudzidzisa? Vana havagoni kubvunza vabereki vavo nokuti havazvizivi.
Inzwi rekurohwa rakabva kupi kubva mukuimba Sophie?
26 December 2017 pa 08: 17
Muhurukuro yeKrisimasi yaWilliam (kwete yeArisand, kana yaNassau) anozivisa apo vanhu vanobva mumamiriro akasiyana-siyana vachasangana. Kunongoratidza kuti vanhu vachasangana kupi nekuda kwekuwedzera uye kuoma kwehutano hwezvinetso. Humanity anokwanisa kuratidza kuti vazivise pasina kupindira mufananidzo (chikara) pamusoro kure-kusvika zvirango uye ngozi Indaneti uye zvose ane chokuita marwadzo. Somuenzaniso mumwe anogona akangwara metres vanorambawo kuti inopedzisira meter, haisi vanosungirwa kuva vakachenjera mita. Uyezve, zvave zviri nyore kunzwisisa zviri kuitika (smart grid) pasi pano. Kuburikidza neesotericism mumwe anokwanisa kunzwisisa nhamba yezvinyorwa kubva mubhuku rebhaibheri rekuzarurwa imwe iri kuitika panyika.
26 December 2017 pa 11: 36
Wilfred kuziva kuti redu duku nyika yodzoka beach ari DNA, DNA kuti mune majini edu haazobvumiri zvakare kuti isu tiri sezvo vanopenga sezvo panguva Atlantis, hakuna zvakashanda. Danai tariro kana njere, chokwadi chinoramba chiripo kuti Rudo rwakatisika isu tose uye rudo runonyanya kunaka. I kufungidzira kuti mukati rinotevera gore ngatiende kutaura 3 masts vose WiFi uye kupfuura kuti asingaoneki pfungwa kudzora simba ngavadzoserwe kure achaita. Izvo zvinouya zvinotevera mhirizhonga nokuti isu hatigone kuita kunze kwezvose zvedu digi steaks izvo chaizvoizvo zvikasi kubva paTema.
Basa redu chii? Basa redu kana kuti chii chawakapinda muhupenyu huno kurangarira kuti ini newe tiri mweya wekunamata.
Isu hatisi vanhu vane zviitiko zvomudzimu,
asi pane zvisikwa zvemweya zvinova nehupenyu hwevanhu panguva ino.
Vose pano vanofara zvikuru 1984, zvinorema zvandiri kufara.
27 December 2017 pa 08: 46
Kana iwe ukashandisa code Atbash kune shoko rokuti 'Baphomet', unowana 'Sophia' sezvazvakanyorwa muchiHebheru. Ichi chinoreva chakavanzika chezwi rokuti 'Baphomet' yakatanga kuwanikwa naDkt. Hugh Schonfeld, nyanzvi mumunda weMipumburu yeGungwa Rakafa uye munyori wePasika Plot.
MuchiGiriki, "Sophia" zvinoreva uchenjeri. I verenga kuti zuro zvakaitika kuti mubhuku "Cracking ari Da Vinci Code" by Simon Cox. (Where, sezvinei, uyewo nyaya okunze ndeimwewo zvakavanzwa kana zvisizvo, sezvo Baphomet anotsanangurwa somunhu ari pamwe nembudzi musoro uye makono muviri, saka hapana shoko iyo yakajeka yaHermaphrodite maitiro.)
30 December 2017 pa 10: 40
Zvimwe zvinyengeri izvo mabhoti aya kubva kuna Her Goertzel ane inzwi revanhu uye Stephen Hawking anofanira kuzviita nezwi re robot. Chinhu chaunofunga nezvazvo.
30 December 2017 pa 11: 40
UNOFANIRA KUONA: CRISPR, iyo Trojan horse uye chinokonzera AI
30 December 2017 pa 11: 49
Ndekupi kwaive kwakagadzwa naKajsa Ollongren, Dr. Ronnie 'Mengele' Plasterk zvakare, o hongu?
13 Nov 2017 ... Aimbova mushumiri uye aichimbova musayendisiti mukuru Ronald Plasterk ari kuenda kunebhizimisi. Plasterk inoshandiswa nekambani yemishonga inonzi Mytomorrows, iyo inopa varwere vanorwara zvakanyanya nokuwana [[NOT]] inobvumirwa nemishonga.]]
30 December 2017 pa 11: 57
Zvinoshamisa izvo IGZ (RIVM) inofunga pamusoro peizvi? Funga nezvekuzivikanwa kunorapa kupemha kunokonzerwa naRoel Coutinho uye Ab Osterhauses enyika ino
MuNetherlands, Health Care Inspectorate (IGZ) inotarisira kugadzirira, hutano uye kushandiswa kwemishonga. RIVM inotsigira kutarisana nesayenzi yezano uye nebasa re laboratori.
Onai nyuchi (mucheki) chinomiririra pakutanga kweAppies presentation, musanetseka kuti vane zvakanakisisa nesu nekuda kweh?
30 December 2017 pa 12: 12
Chii chakashanda kwezviuru zvemakore kuti madzitateguru edu abvisirwa kunze neKlaplter Katan:
"Zviri pachena kuti pfungwa yacho ichiri kuenderera mberi kuti mbeu inogona kuva yakanaka kwauri. PaIndaneti iwe uchiri kuwana zviti zvinoporesa uye zvinodzivirira kenza uye rudzi rwemhosva. Izvo zvinotungamirira kutengeswa uye zvikwereti pamhando iyi yemari zvakakura. Hazvibhadha chinhu. Iyo inoparadza, apricot kernels. "
Gert ARTS hahaha vanoziva kuti vangauyisa sei kuNAZI yemabhizimisi emhuri (Mohn) Bertelsmann AG. Dema rakachena uye zvakasiyana ... Sieg Heil
30 December 2017 pa 13: 37
Ndakaona zvakare, ihwo humwe hunyengeri hwokunyengera vanhu.
Dambudziko nderokuva kuti apricot kernels inorwadza zvechokwadi inogona kupa chimwe chinhu kana iwe ukatora zvakawanda pakarepo.
Asi varairi vanorambidzwa kutaura pamusoro pekuvhara izvo zvinyorwa zvinorwadza ndezvipi!
Ndicho chikonzero vanhu vachifunga kuti ichangobva "shumba", panzvimbo yezvinodhaka zvinopesana nekenza (iyo inonyanya kukosha)
30 December 2017 pa 23: 02
Iwe unosvika sei iko zvino?
Asiri anopesana nekenza mumiriri? Icho chinhu chinotyisa uye mazwi ako anokuvadza zvikuru kune pharma guru ???
31 December 2017 pa 04: 13
tsvaga paCodex Alimentarius Fritz ter Meer IG Farben.
Zvinosuruvarisa, nzvimbo dzakawanda dzisina kuvimbika (Earth Matters, Nibuhu etc) dzakanyora pamusoro payo, chii chaiyo maNAZI midzi maererano neCodex A. Handizivi uye handigoni kuwana zvivimbiso zvakatendeseka zvepamusoro pano. NIburu.co/ Nine 4 nhau uye vamwe vose, vanovonga nokuda kwekuvhiringidza mvura.
30 December 2017 pa 12: 17
NDIANI ANOTAURA IYI H ** KUBVA MUBIRI FARMA:
Gert Arts kubva kuRermermond dzakapedza hafu yebhegi. Icho chakanga chakaita kuti amuuraye. "Ndakanga ndava neuturu hwakanyanya. Ndave ndichifamba-famba pamucheto werufu kwechinguva. "
30 December 2017 pa 12: 18
30 December 2017 pa 15: 48
@ZIO, chinangwa chinoratidzika kwandiri bhah ..:
Erica Kruiderijen anobvisa masaga ose ane apricot kernels kubva pamashalofu. Iketani inoita izvi nekuda kwehutu hwemutengi. Akadya mapango uye akapedzisira ari muchikwata chekuchengetedza.
Mu mbeu ndiyo cyanide, iyo yakasimba kwazvo yehupfu, inozivisa RTL News Chishanu. Zvokudya neVatengi Vekuchengetedzwa Kwemagetsi zvakarongedzerwa mu2007 kugadzirisa kuisa mabhegi uye huwandu hwehuwandu hunokonzerwa nehutu hwema apricot kernels.
« Kutanga-up Nepnieuws-Checker inopa vatapi venhau vanodzinga De Persgroep mukana mutsva
Gore rinonakidza kune vese vaverengi uye kutanga kwakanaka kune gore idzva »
Total Visits: 15.832.889
Wilfred Bakker op Inguva yakareba sei VaTrump vari muchigaro chekushungurudzika ikozvino izvo zviratidzo zvekutanga zvehondo yevagari zvave kuoneka?